2 Samuel 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
14 Joab+ nwa Zeruya+ wee mara na obi eze dị n’ebe Absalọm nọ.+
2 Joab wee ziga ozi na Tekoa+ ma si n’ebe ahụ kpọta otu nwaanyị maara ihe+ wee sị ya: “Biko, ruwe uju, yirikwa uwe iru uju, etekwala mmanụ;+ dịrịkwa ka nwaanyị nke nọworo na-eruru onye nwụrụ anwụ uju ọtụtụ ụbọchị.+
3 Gakwuru eze, gwa ya ihe dị otú a.” Joab wee gwa ya ihe ọ ga-ekwu.+
4 Nwaanyị Tekoa ahụ wee bịakwute eze, gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala+ wee kpọọ isiala, sị: “Biko, eze, zọpụta m!”+
5 Eze wee jụọ ya, sị: “Ọ̀ bụ gịnị na-eme gị?” Nwaanyị ahụ wee sị: “N’ezie, abụ m nwaanyị isi mkpe,+ ebe ọ bụ na di m anwụwo.
6 Ohu gị nwaanyị nwere ụmụ nwoke abụọ, ha abụọ wee malite ịlụ ọgụ n’ọhịa+ n’enweghị onye nnapụta+ ga-egbo ha. N’ikpeazụ, otu wee gbuo ibe ya.
7 Lee, ndị ezinụlọ m dum ebiliwo megide ohu gị nwaanyị wee sị, ‘Kpọpụta onye ahụ gburu nwanne ya ka anyị gbuo ya n’ihi mkpụrụ obi nwanne ya,+ bụ́ onye o gburu,+ ka anyị laakwa onye nketa n’iyi!’ Ha ga-emenyụkwa icheku ọkụ m fọdụrụnụ, wee mee ka di m ghara inwe aha ma ọ bụ onye ga-afọdụrụ ya n’elu ala.”+
8 Eze wee sị nwaanyị ahụ: “Laa n’ụlọ gị, mụ onwe m ga-enye iwu banyere gị.”+
9 Nwaanyị Tekoa ahụ wee sị eze: “Onyenwe m eze, ka njehie ahụ dịrị n’isi m nakwa n’isi ụlọ nna m,+ ma ka aka eze na ocheeze ya dịrị ọcha.”
10 Eze wee sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla agwa gị okwu, kpọtara m ya, ọ gaghịkwa enye gị nsogbu ọ bụla ọzọ.”
11 Ma ọ sịrị: “Biko, eze, cheta Jehova bụ́ Chineke gị,+ ka onye ọbọ ọbara+ ghara ịnọ na-akpata mbibi mgbe niile, ka a gharakwa ịla nwa m nwoke n’iyi.” O wee sị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ otu ntutu isi+ nke nwa gị nwoke agaghị ada n’ala.”
12 Nwaanyị ahụ wee sị: “Biko, ka ohu gị nwaanyị+ gwatụ onyenwe m eze okwu.”+ O wee sị: “Kwuo!”+
13 Nwaanyị ahụ wee sị: “Gịnịzi mere i ji chee ihe dị otú a+ imegide ndị Chineke?+ Ka eze na-ekwu ihe a, ya onwe ya dị ka onye ikpe mara,+ n’ihi na eze akpọlatabeghị onye nke ya a chụpụrụ achụpụ.+
14 N’ihi na anyị ga-anwụrịrị+ wee dị ka mmiri nke a na-awụpụ n’ala, bụ́ nke na-enweghị mkpokọta. Ma Chineke agaghị ebipụ otu mkpụrụ obi,+ o chepụtawokwa ihe mere onye a chụpụrụ achụpụ ga-eji bụrụ onye a na-achụpụghị n’ebe ọ nọ.
15 Ugbu a m batara ịgwa onyenwe m eze okwu a, ọ bụ n’ihi na ndị mmadụ menyere m ụjọ. Ọ bụ ya mere ohu gị nwaanyị ji sị, ‘Biko, ka m gwa eze okwu. Ma eleghị anya, eze ga-eme ihe banyere ihe ohu ya nwaanyị kwuru.
16 N’ihi na eze gere ntị iji napụta ohu ya nwaanyị n’aka nwoke na-achọ ibipụ mụ na naanị otu nwa nwoke m nwere n’ihe nketa Chineke nyere,’+
17 ọ bụ ya mere ohu gị nwaanyị ji sị, ‘Biko, ka okwu onyenwe m eze weta ezumike.’ N’ihi na dị nnọọ ka mmụọ ozi+ nke ezi Chineke dị, ọ bụ otú ahụ ka onyenwe m eze dị, n’ịmata ihe dị iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ,+ ka Jehova bụ́ Chineke gị nọnyekwara gị.”
18 Eze wee zaa nwaanyị ahụ, sị: “Biko, ezorola m ihe ọ bụla n’ihe m ga-ajụ gị.”+ Nwaanyị ahụ wee sị: “Biko, onyenwe m eze, jụwa.”
19 Eze wee jụọ ya, sị: “Aka Joab+ ọ̀ dị n’ihe a dum i kwuru?”+ Nwaanyị ahụ wee zaa, sị: “Dị nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ,+ onyenwe m eze, ọ dịghị onye pụrụ ịhapụ ihe niile onyenwe m eze kwuru gaa n’aka nri ma ọ bụ n’aka ekpe; n’ihi na ọ bụ onye na-ejere gị ozi bụ́ Joab nyere m iwu, ọ bụkwa ya gwara ohu gị nwaanyị ihe a niile m kwuru.+
20 Ọ bụ ka e wee lee okwu a anya n’ụzọ dị iche mere onye na-ejere gị ozi bụ́ Joab ji mee ihe a, ma onyenwe m nwere amamihe yiri amamihe mmụọ ozi+ nke ezi Chineke iji mara ihe niile dị n’ụwa.”
21 Eze wee sị Joab: “Lee, m ga-eme ya.+ Ya mere, gaa kpọlata nwa okorobịa ahụ bụ́ Absalọm.”+
22 Joab wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, kpọọ isiala wee gọzie+ eze; Joab wee sị: “Taa ka ohu gị maara na ihe m masịrị gị,+ onyenwe m eze, n’ihi na eze emewo ihe ohu ya kwuru.”
23 Joab wee bilie gaa Geshọ+ wee kpọlata Absalọm na Jeruselem.+
24 Otú ọ dị, eze sịrị: “Ya lawa n’ụlọ ya, ma ọ gaghị ahụ ihu m.”+ Absalọm wee laa n’ụlọ ya, ọ hụghịkwa ihu eze.
25 Ọ dịghị nwoke mara mma+ n’Izrel dum dị ka Absalọm, nke a ga-eto otú e si eto ya. Malite n’ọbụ ụkwụ ya ruo n’opu isi ya, ntụpọ adịghị ya n’ahụ́.
26 Mgbe ọ kpụrụ isi ya—ọ na-abụkwa ná ngwụcha afọ ọ bụla ka ọ na-akpụ ya; ebe ọ na-adị arọ+ n’isi ya, ọ na-akpụ ya—ọ tụrụ ntutu isi ya atụ̀, ya adịrị narị shekel abụọ ma e jiri nkume ihe ọ̀tụ̀tụ̀ eze tụọ ya.
27 E wee mụọrọ Absalọm ụmụ nwoke atọ+ na otu nwaanyị onye aha ya bụ Tema. Ọ bụ nwaanyị mara mma nke ukwuu.+
28 Absalọm wee bie na Jeruselem afọ abụọ zuru ezu, ma ọ hụghị ihu eze.+
29 Absalọm wee zie ozi ka a kpọọ Joab, ka o zie ya ka ọ gakwuru eze, ma o kweghị abịakwute ya. O wee zie ozi ọzọ, nke ugboro abụọ, ma o kweghị abịa.
30 N’ikpeazụ, ọ sịrị ndị na-ejere ya ozi: “Ùnu hụrụ ibé ala Joab ahụ dị n’akụkụ nke m, bụ́ ebe ọ kụrụ ọka bali? Gaanụ sunye ya ọkụ.”+ Ndị na-ejere Absalọm ozi wee sunye ibé ala ahụ ọkụ.+
31 Joab wee bilie bịakwute Absalọm n’ụlọ, jụọ ya, sị : “Gịnị mere ndị na-ejere gị ozi ji sunye ibé ala m ọkụ?”
32 Absalọm wee sị Joab: “Lee! M ziri gị ozi, sị, ‘Bịa ebe a ka m zie gị ozi ka ị gakwuru eze, sị: “Olee ihe mere m ji si Geshọ lọta?+ Ọ gaara akara m mma ma a sị na m ka nọ n’ebe ahụ. Ma, ugbu a, ka m hụ ihu eze. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọjọọ m mere,+ ya gbuo m.”’”
33 Joab wee bịakwute eze, kọọrọ ya. O wee kpọọ Absalọm. Absalọm wee bịakwute eze, gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala n’ihu eze wee kpọọrọ ya isiala; e mesịa, eze susuru Absalọm ọnụ.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D10%26Chapter%3D14%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl